KEEBAA DARAN,GUMEEYSIGII HORE IYO ADOONSIGA C/QASIM EE LABADA WABI ?
Dunidu waxay soo martay heerar kala duwan , waxaana mar hore jiri jiray in dadka la adoonsado loolana dhaqmo sida xoolaha oo kale.
Arrintaasna baabi'inteedana waxaa qayb weyn ka qaatay nin Ingiriiska u dhashay oo magaciisu ahaa Wilyam Wilber Fooris oo ka codsaday wadamaadii Gumeystayaasha ahaa ee Yurub in ay joojiyaan dhaqankaas cadawga ku ahaa sharafta aadamigu uu leeyahay. Taasina aakhirkii way hirgashay,waxaana la mamnuucay ka ganacsiga xoolaha caqliga leh ee aan ula jeedo dadka.
Dawladda Talyaaniga oo markeedii horeba laga qadiyey qaybsigii Afrika ayaa waxaa loo oggolaaday in Somaaliya ay qaadato , taasoo keentay in ay si ay u muujiyaan in ay yihiin dawlad garaadkeedu sareeyo ayaa iyadoo ku dayaneeysa Ingiriiiska ay Somaaliya ka mamnuucday adoonsiga iyo ka ganacsigiisaga oo Koonfurta ka jirtay gaar ahaana Jubba iyo Shabeelle.
Marka Talyaaniga oo siyaasaddaas fulinaya ayaa wuxuu taageeray halgankii Nasiib Buundo uu ka waday degaamadaas oo aakhirkii dhalisay in la dejiyo dadkii la adoonsan jiray degaanka Jowhar.
Waxaana la wada garan karaa in isticmaarku inkastoo uu dulli ahaa hadana uu lahaa dhinacyo wanaagsan, kuwasoo ay ka mid yihiin in uu barary umadihii uu gumeeysan jiray tabo badan oo ayan horay u aqoon kana mid yihiin adeegsiga warshadaha, daryeelka cilmiyeeysan ee caafimaadka iyo kuwo kaloo la mid ahba.
Marka , talyaaniga waxyaabaha kale ee uu sida gaarka ah Somaalidu u baray waxa ka mid ah isagoo tallaal iyo miro beereedyo cusub dalka keenay sida muuska, Bambeelmo ( Grape fruit ) iyo
Si arrintaas uu u fuliyo ayuu Talyaniga wuxuu dhul beereedyada wanaagsan ka dhacay Somaalidii laheyd ee degaankoodu ahaa Shabeelle iyo Jubba, ka dibna si arrintaas guul uga gaaro wuxuu isticmaali jiray shaqaale uu dhulka ku qoto oo waxba ka duwaneyn adoonsiga iyagoo xuquuq aay lahaayeen eyan jirin. Tacadigaas dadka loo geysan jirayna waxaa ka dhiidhiciyey Somaalidii oo dhan, tusaale ahaanna waxaa u ah halgankaas labadaan arrimood oo soo socda :-
B- Halgankii SYL ay u gashay in ay foolxumooyinkaas gaaladu dalka ka wadeen ayaa ah mid
lama illaawaan ah ayna ka mid aheyd warqad dacwo aheyd oo ay SYL u qortay
boqortooyadii ingiriiska kuna saxiixnaa marxuum Sakhaawadiin ee looga dalbaday
in biliiliqada dhul beereedka Talyaaniga (Force occupation) iyo khasab ugu
shaqeeysigiisaba (Force labour) la joojiyo, taas oo la yeelay.
T-Somaalidii deganeyd labada wabi ee la adoonsan jiray oo diidan sii joogitaanka Talyaaniga ee
Somaaliya iyo dabadhilifyadiisiiba ayaa waxay shucuurtooda ku muujiyeen siyaabo kala duwan
oo ay ka mid ahaayeen geeraaro iyo mudaaharaadyo sharciga gumeysiga Ingiriisku u saamaxay.
Waxayna yiraahdeen iyagoo halqabsi ka dhiganaya nin Talyaani ahaa oo u darnaa Somaalida
magaciisuna ahaa Sii Sii oo hadda xarumaha Xamar midkood loogu magac daro ,
" Sii Sii Ma Sariigte, Siibidaada la baajin Maayo".
Shirkii Carte ka hor iyadoo xaaladdu ciriiri ku tahay kuwa dulmiga raba ayaa Jabuuti waxay qabatay shirkii Carte oo markii la arkay isdaba marinteedana ay sababtay in qaybahii ugu muhimsan Somaaliya ay qaadacan , beesha caalamkuna u fidin weeydo taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeedba.
Cartana, wixii ka soo baxay, sidii ay waxyaabahaas ay ku yimaadeen iyo wixii ay fashayba waa mid la wada ogyahay. Waxase ugu darneyd in C/qasim uu si bareer ah uga dhinac maray ballantii uu halkaas ugu soo qaaday waxmagaratadii joogaty markuu lahaa,' Reerkeyga, aniga ayaa Somaalida ka qaban doona '. Taasoo uu illowway markii lacag ka badan $50 milyan iyo hubba uu magac umadda ku helay , iskadaa in uu wax kale qabtee reerkiisii uu ku sii xoojiyey hantidii umadda ee loo dhiibtay.
Marka, si waxmagaratadii iyo taageerayaashoodaba u khaldana wuxuu farta ugu fiiqay Itoobiya iyo colaadii hore ee naga dhaxeeysay.
Su'aashuna waxaa weeye ma Itoobiya ayaa adoonsi ka wada Somaaliya, mise degaano kale xoog ku heysata ama boobtay hantidii dadka iyo dawladda ee Somaaliya?
Jawaabtuna waa "Maya" ee musiibada Somaaliya ku habsatay ayaa ah in kuwii mooryaanta ahaa ay gar yar oo ibliis inta ay la baxeen u heysta waxyaabaha ay dulmiga ku heystaan in ay tahay qaniima ay dagaal ku heleen sida uu u heysto tuugga Marka " Indho Cade" ee wakiilka u ah Xasan Dahir Aweys oo militia beeleedkooduna uu C/qasim yiraahdo waa kuwii qaranaka.
Teeda kale dadka yaqaan C/qasim maba la yaabana qabiilinimadiisa iyo sida foosha xun ee uu u dhaqmo iyo boobkii wixii gacantiisa soo gala isagoo u heysta in ay tahay " Wa maa malakat eeymaanikum " oo kale ee waxaa yaab leh caaqyada dadkooda uu gumeysto Ina Salaad Boy oo cambaareenaaya Itoobiyadii uu cuqubada uu dalka ku hayo ku qarinayae .
Runtuna waxay tahay in Itoobiya ayan aheyn tii hore ee Mingisto oo shirkii Burco ka dambeysay, waxaana xasuustaa mar uu Mingistu uu wareeysi uu ku yiri markuu u baxsaday Zimbabwe in wixii ugu weynaa ee uu qabtay ay aheyd in cuqdad uu galiyey midnimadii Somaalida.
Waxaa kaloo iyaduna markhaati ma doonta ah in Meles uu wax badan uu u qabtay Somaalida kuwa Itoobiya ku dhaqan ee uu ilaa iyo maanta u ogol yahay in ay gooni u go'aan inkastoo cudurkii qabyaalada iyaguna uu taabtay waloow ay caalnkooda ay ka muuqato calankii Somaaliya iyo xidigtii 5ta aheydba, waxaa kaloo xusid mudan sidii Itoobiya ilaa iyo maanta ula dhaqanto qaxootiga Somaalida ah oo ay u noqotay dalkoodii labaad iyo iyadoo tageero u fidisay kuwii dulmaanaa oo maanta degaankooda xoog ku soo dhacsaday sida RRA.
Waxaana xusid mudan in Meles mar in ka badan uu ku celceliyey in ay taageersan yihiin midnimada Somaalida xataa iyadoo Somaaliland ay u sheegtay in ay Zeylac ay siineeyso Itoobiya si loo ictiraafo iyo waliba isagoo diiday Buubaagii C/qasim u ahaa wasiirka arrimaha dibedda in ay u saxiixaan in dhulka Itoobiya ee Somaalidu leedahay ay yihiin kuwa Somaaliya ayan mustaqbalka ka hadli karin.
Marka dadka noocaas ah miyaa ka hadli kara wadaniyadda iyo muslin-nimaba ?
Nabigeenii suubanaa yaa waxaa uu yiri mar uu ka hadlayey xasanaatka ay leedahay u naxariisashada dadka ehelka iyo sida ay u kala mudan yihiin, ( Aqrab Thuma Aqrab ), sidaas oo kale ayey Somaalidu ay tiraahdaa ,( Ninkii tiisa daryeela ayaa tan kalena ku dara ).
Waxyaabahaas oo dhan waxaan ku garan karnaa in Somaalida la adoonsado , xoog dhulkoodii iyo hantidoodiiba lagu heysto ayan cidna wax tari karin iskaba daa Somalida Itoobiyaba ee taakuleynta dibedda looga diro aan laga furan sida koonfurta Somaaliya.
Waajibka kowaad ee Soomaliduna waxay tahay in marka hore ay iska dulqaadaan dulmiga ka nacfiga daran tii Talyaaniga,taas oo aan aaminsanahay in aakhirkii ay imaan doonto, taariikhdii la soo dhaafayna waxay na tuseeysaa in adoonsiga iyo gumeeysiguba laga adkaan doono oo waliba Sii Siiga cusub ee Somaaliya ee sariigashada aqoonna la siibi doono sidii Sii Siigii ka horeeyey.